मैले मेरो कार्यकाल सफल पनि बनाएको छु | Janaakash
Home / अन्तर्वार्ता / मैले मेरो कार्यकाल सफल पनि बनाएको छु
Janaakash Media १८ असार २०७६, बुधबार ०८:११	अन्तर्वार्ता Leaveacomment 36 Views
नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २७ औं साधारण सभा तथा १५औं निर्वाचन यही असार २७ गते हुन गइरहेको छ । त्यस २७ औं निर्वाचनमा झण्डै १००१ सदस्यीय रहेको संघको अध्यक्षको नेतृत्व गर्न ४ जना प्रत्यासी देखिएका छन्, त्यसमध्ये २५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा रहेका साथै वैदेशिक लोकतान्त्रक फोरमका समेत निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा कार्य समिति सदस्य उपमहासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै विभिन्न समिति, संयोजकको भूमिकामा काम गर्दै आउनु भएका विष्णुप्रसाद गैरे पनि मैदानमा उत्रिएका छन् । उनीसँग हामीले चुनावको सरगर्मी के छ भनि यस अंकमा समेटेका छौं ।
० नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा तपाइको उम्मेदवारी किन ?
व्यवसायीहरुको हक, अधिकार सुरक्षित गर्न, अहिले मलेसियामा गइरहेका हाम्रा कामदारहरु रोकिएका छन् उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न, व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ व्यवसायको लागि ऐन, कानुनहरु छन् हामी पनि जिम्मेवार नागरिकहरु छौ त्यसैगरी सरकार पनि त्यत्तिकै मात्रामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ त्यसको लागि मेरो पहल हुन्छ, अर्को फ्रि भिषा, फ्रि टिकट छ । त्यसलाई व्यवसायीले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार र अन्य राष्ट्रले वैदेशिक रोजगारमा गरेको अभ्यास अध्ययन गरेर हाम्रो देशमा पनि व्यवसायीको हित वैज्ञानिकीकरण गर्न मेरो उम्मेदवारी हो ।
० तपाई अध्यक्षको लागि मैदानमा हुनुहुन्छ तर लोकतान्त्रिक फोरमबाट त कमल तामाङलाई सिफारिस गरिसक्यो भनेर बाहिर आयो यो कत्तिको सत्य हो ?
त्यो सत्यता होइन, वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक फोरमको मिटिङमा कोरमै नपु¥याई गरेको निर्णय वैधानिक हुँदैन । कमल तामाङलाई सिफारिस गरियो भनेर बजारमा आएका हल्ला मिथ्या हुन् । त्यसमा सत्यता छैन । त्यो त आम मिडियाकर्मी तपाईहरुलाई पनि थाहा भइसकेकै छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अन्य प्यानलको समेत समर्थन जुटाउँदै अध्यक्षको वैधानिक उम्मेदवार म हो । व्यवसायीहरुमा एक खालको माहोल बनि सकेको छ । यसपटकको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरे भनेर व्यवसायीको आशा र भरोसा बनिसकेको छ । वास्तविकता चाहिँ यो हो । को उम्मेदवार हो होइन तिर मेरो ध्यान गएको छैन ।
० नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनावताका निक्कै चर्चामा रहने साना व्यवसायी र ठूला व्यवसायीको कुरा खुबै उठ्ने गर्छन् । तपाइलाई के लाग्छ र कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यसमा व्यवसायी कोही ठुला कोही साना हुँदैनन् सबै सम्मान छन् । होला आफ्नो क्षमताले धेरैथोरै कामदार पठाउने हुन्छ तर लाइसेन्सको अधिकार एउटै छ, समान छ । त्यसकारण मलाई लाग्दैन व्यवसायी ठुला र साना हुँदैनन् हैसियत बराबर हुन्छ अझ हामी त नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा सामुहिक एकताको कुरा गर्दैछौं व्यवसायीको हितका निम्ति एकताबद्ध हुँदैछौं त्यसकारण व्यवसायी समान छन् अरुले उठाउने सस्तो लोकप्रियताको लागि र व्यवसायीलाई ढाट्ने काम मबाट हुँदैन, गर्दिन ।
० तपाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनिरहँदा वैदेशिक लोकतान्त्रिक फोरमको समर्थन कत्तिको छ ? त्यो भन्दा बाहिर रहेका विशेष गरेर सरकार समर्थित प्रगतीशिल पक्षका व्यवसायीहरुले तपाइलाई समर्थन गर्लान् त ?
यतिबेला जसरी सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ छ त्यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्य समितिका पनि दुई तिहाई छ । त्यो दुई तिहाइले व्यवसायीमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । ऐन कानूनहरु एकपछि अर्को गर्दै व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएका छन् । वर्तमान कार्य समितिको कुनै भूमिका पहल भइराखेको छैन । त्यो समस्या त्यहाँभित्र अर्थात् सरकार पक्ष हुँ भन्ने व्यवसायलाई समेत यतिबेला निक्कै उत्पन्न भइराखेको छ । त्यसकारण मलाई ती अप्ठ्यारो महशुस भएका सरकार पक्षका साथीहरुले समेत साथ दिने बचन गरिसकेका छन् यी सबै कुराहरु मिल्दै गएका हुँदा म साझा उम्मेदवारको रुपमा मेरो उम्मेदवारी र नेतृत्व प्राप्त गर्ने आधार बनेको सहजै अनुमान गर्न थालेको छु । जिष्टमा के भन्न सक्छु भने मलाई सबैको समर्थन छ ।
० चुनाव नजिकिँदै छ । प्रतिस्पर्धीहरु चार जना छन् कतिको आत्मविश्वास छ अध्यक्ष हुन्छु भन्नेमा ?
म २४ २५ वर्ष भयो निरन्तर यो व्यवसायमा लागेको जवकी मैले महेन्द्र शेरचनलाई भोट हाल्ने मौका पाएको थिएँ त्यतिबेला ४०÷४५ जना मात्र सदस्य हुन्थ्यौ त्यसपछि निरन्तर नेपाल वैदेशिक रोजागर व्यवसायी संघमा विभिन्न भूमिकामा हुँदै उपाध्यक्षसम्म नेतृत्व सम्हालिसकेको छु । मेरो कार्यकाल सफल पनि बनाएको छु । सँगसँगै लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरममा अध्यक्षको हैसियतमा रहेर कार्यकाल सफल पारिसकेको हुँदा व्यवसायीहरुमा मेरो क्षमता सबैलाई थाहा भइसकेको छ । त्यो भएको हुनाले सबै व्यवसायीहरुले विष्णु प्रसाद गैरे काम गर्न सक्ने सरकारी निकायमा पहल गर्न सक्ने व्यवसायीहरुको सल्लाह र सुझावमा सामुहिक निर्णय गर्ने भन्ने विश्वास छ । त्यसकारण म यसपटकको साधारण सभासहित हुन गइरहेको १५ औं निर्वाचनमा अत्याधिक मतले विजयी हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।
० अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीलाई ६ करोड ५ करोड लादिएको छ । देशमा ऐन, कानुनहरु पर्याप्त छन् । यी विषयहरुलाई बहसमा लान सकिन्छ । व्यवसायीमा आवश्यकता अनुसार ऐन कानुनहरु संशोधन हुन सक्छन् त्यसमा व्यवसायीहरुको एकता विना सम्भव छैन । मेरो व्यवसायीहरुमा हार्दिक अनुरोध छ । हामी एउटा एजेण्डा बनाएर जाउँ त्यसैमा सबैको हकहित हुन्छ । मेरो सबै व्यवसायीहरुमा यही आग्रह छ । साथै मलाई यो महत्वपूर्ण समयमा आप्mना भनाई राख्न सहयोग पु¥याउनु भएकोमा जनआकाश मिडिया प्रा.लि.लाई विशेष धन्यवाद ।